Koox Rabta Inay Si Joogta Ah U La Wareegto Alexis Sanchez Oo Ugu Danbeyn La Helay & Sanchez Oo Ka Horimaan Kara Man United Bishaan - Gool24.Net
Koox Rabta Inay Si Joogta Ah U La Wareegto Alexis Sanchez Oo Ugu Danbeyn La Helay & Sanchez Oo Ka Horimaan Kara Man United Bishaan
August 3, 2020 Saed Mohamed
Manchester United ayaa ugu danbeyn xal u heshay Alexis Sanchez xagaagan.
Xiddigii hore ee Arsenal oo ku biiray Red Devils bishii Janaayo 2018 islamarkaana loo xiray maaliyada caanka ah ee No.7 ayaa noqday mid ka mid ah saxiixyadii ugu xumaa ee taariikhda Premier League.
Sababo aan la garaneynin, Sanchez ayaa awoodi waayay inuu Old Trafford ku soo bandhigo qaab ciyaareed la mid ah kii uu ku soo bandhigay Udinese, Barcelona iyo Emirates Stadium.
Taas bedelkeeda xiddiga reer Chile waxa uu dhaliyay shan gool 45 kulan uu u saftay kooxda isagoo qaadanayay mushahar gaaraya 500 kun ginni isbuucii waa marka lagu darro lacagaha sharuudaha ku xirnaa ee qandaraaskiisa ku jira.
Sanchez ayaa amaah ugu wareegay Inter Milan xagaagii la soo dhaafay isagoo qeyb ka ahaa xiddigaha sida Ashley Young, Christian Eriksen iyo Romelu Lukaku kuwaasoo ka mid noqday kooxda Antonio Conte.
Sannad ka dib heshiiskiisa amaahda, waxay u muuqataa in Inter ay diyaar u tahay inay heshiiskiisa ka dhigto mid joogta ah taasoo soo gaba gabeyneysa qarowgiisii Man United.
Joronaaliistaha Talyaaniga Fabrizio Romano ayaa sheegay caawa in heshiis shaqsi ah ay gaareen Inter iyo Sanchez, iyadoo kooxda Talyaaniga ay haatan ka shaqeyneyso sidii ay heshiiskiisa amaahda ah ugu bedeli lahaayeen mid joogta ah.
Romano ayaa Twitter ku soo qoray: “Inter iyo Manchester United waxay ku dhow yihiin inay ka heshiiyaan saxiixa Alexis Sanchez. Inter si joogta ah ayay u iibsan doontaa. Faahfaahinta heshiiska goor dhow ayaa la dhameysitarayaa. Heshiiska shaqsiga ah waa la isku raacay durbaba”
Dhanka kale Man United ayaa ogolaatay inay sii dheereyso heshiiska amaahda ee Alexis Sanchez inta laga gaarayo heshiis joogta ah taasoo u ogolaaneysa Inter inay Sanchez ku soo darsato liiskeeda xiddigaha u ciyaaraya Europa League.
United ayaa markii hore ka biyo diidaneyd in Sanchez uu dheelo Europa League madaama heshiiskiisa amaahda uu ku ekaa dhamaadka horyaalka Serie A.
Laakiin Inter ayaa bixisay lacago dheeri ah si loogu sii ogolaado inuu u ciyaaro Sanchez koobka Europa League, taasoo la micno ah in Alexis Sanchez uu ka horimaan karo Man United finalka Europa League ee dhamaadka bishaan Agoosto.
Tartamada Yurub kama jiro sharci diidaya in ciyaaryahan uu ka horyimaado kooxda iska leh, sidaasi darteed Sanchez xitaa haddii uusan si joogta ah ugu biirin Inter ka hor finalka Europa League, wuu ka horimaan karaa Red Devils.